KEDU SSD ỤGBỌALA ỊHỌRỌ MAKA LAPTỌỌPỤ - SSD - 2019
Ndi nwepu laptọọpụ ASUS K53S nke mgbakọ ọ bụla ga-adị mkpa iji wụnye ngwanrọ maka ngwa ahụ a kwadoro mgbe ịzụrụ ma ọ bụ reinstalling sistemụ. Nke a nwere ike ime ọbụna site na onye ọrụ nke na-enweghị nkà ma ọ bụ ihe ọmụma ụfọdụ, ebe ọ bụ na mmadụ nile dị mfe ma ghara ịchọ oge dị ukwuu. Ka anyị lebakwuo anya na ụzọ dị iche iche nke nyocha na ntinye faịlụ na kọmputa laptọọpụ nke ihe nlereanya a.
Download drivers maka ASUS K53S.
Usoro ọ bụla akọwapụtara na isiokwu a bụ ụdị algorithm dị iche iche nke omume, ya mere, ọ dị mma maka ndị ọrụ dị iche iche. Anyị na-atụ aro na ị ga-amatakwa onwe gị na usoro ọ bụla iji họrọ nke kachasị mma, mgbe nke ahụ gasịkwara, iji mebie ntuziaka.
Usoro 1: Asus Enyemaka Enyemaka
ASUS, dịka ọtụtụ ụdị isi maka ịmepụta kọmputa na laptọọpụ, nwere ebe nrụọrụ weebụ nke onye ọ bụla nwe ngwaahịa ha nwere ike ịchọta ozi bara uru maka onwe ha, gụnyere ndị ọkwọ ụgbọala na ngwanrọ dị mkpa. Tụlee usoro ịchọta na nbudata ngwanrọ gaa na K53S PC dị mkpokọta nke mgbakọ ọ bụla:
Gaa na akwukwo Asus
Gaa na ụlọ ọrụ ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ.
Mepee tab "Ọrụ" ma gaa "Nkwado".
Na nyocha ọchụchọ, pịnye ihe nlereanya laptọọpụ gị ma echefula banyere mbipụta ahụ. Ha dị iche na akwụkwọ ozi ikpeazụ na aha nlereanya ahụ.
Akwụkwọ enyemaka ga-emeghe maka ngwaahịa a, ọ ga-adịkwa mkpa ịga mpaghara "Ndị ọkwọ ụgbọala na ọrụ".
Agaghị achọpụta sistemụ arụmọrụ na-akpaghị aka, n'ihi ya, ị ga - ahọrọ ya site na menu aha nkwekọrịta.
Mgbe ịhọrọ, ị ga-ahụ ndepụta ndị ọkwọ ụgbọala niile dịnụ. Na ya, ị nwere ike ịchọta ihe ị chọrọ, chọpụta ụdị ọhụrụ ahụ ma pịa bọtịnụ ahụ. "Download".
Mgbe nbudata ahụ zuru oke, naanị ị ga-emepee ihe nkwụnye ahụ ebudatara ma soro ntuziaka ndị dị mfe gosipụtara na ihuenyo.
Asus Live Update bụ ọrụ njirimara nke na-achọgharị na-akpaghị aka maka mmelite na laptọọpụ nke ụlọ ọrụ ahụ dị n'elu. Ọ na-enye gị ohere ịchọta ọ bụghị naanị faịlụ ndị dị ọhụrụ maka ọrụ nke ngwanrọ ọzọ, kama na-achọkwa mmelite ọkwọ ụgbọala. Ibudata ngwanrọ dị otú a site na ọrụ a bụ:
Mepee weebụsaịtị ASUS.
Mouse n'elu menu popup "Ọrụ" ma gaa na ngalaba "Nkwado".
Tinye ngwa laptọọpụ nke ị na-eji n'ime akara kwesịrị ekwesị.
Na mepee taabụ ị ga-aga na ngalaba ahụ. "Ndị ọkwọ ụgbọala na ọrụ".
Pịgharịa gaa na ndepụta iji chọta ma budata usoro dị mkpa na ngwaọrụ gị.
Mgbe nbudata ahụ zuru ezu, gbakwunye onye nhazi ahụ, gụọ ịdọ aka ná ntị ma pịa ka ị gaa nwụnye. "Na-esote".
Ị nwere ike ịhapụ ụzọ ebe a ga-echekwa faịlụ niile dị ka ọkọlọtọ ma ọ bụ gbanwee ya na ihe achọrọ.
Mgbe ahụ, usoro nhazi nrụnye ga-eme, mgbe nke a gasịrị i nwere ike mechie windo ma malite Live Update onwe ya. Mgbe ịmalite, ị ga-amalite "Lelee nlele ozugbo".
Achọpụta na-akpaghị aka ga-amalite, nke naanị chọrọ njikọ Ịntanetị. Ọ bụrụ na achọta mmelite, itinye ha, ị kwesịrị ịpị "Wụnye".
Mgbe emechara usoro niile, akwadoro ka ịmalitegharịa laptọọpụ ahụ maka mgbanwe niile ị ga-eme.
Nzọụkwụ 3: Ngwá ọrụ pụrụ iche maka ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala
Na Intanet, onye ọrụ ga-enwe ike ịchọta ngwanrọ maka uto ọ bụla. E nwekwara software nke na - enye gị ohere ịchọta ma wụnye ndị ọkwọ ụgbọala achọrọ. Ụkpụrụ ọrụ nke ndị nnọchiteanya dị otú ahụ dị mfe - ha na-enyocha ngwa ndị ahụ, budata faịlụ ọhụrụ na Intanet ma wụnye ha na komputa. O siri ike ịhọrọ ụdị mmemme ahụ; isiokwu anyị na njikọ dị n'okpuru ga-enyere gị aka.
Anyị nwere ike ịkwado ndụmọdụ n'enweghị nsogbu maka nzube ndị dị otú ahụ na Nzuzo DriverPack, ebe ọ bụ na ngwanrọ a egosipụtawo ya nke ọma ruo ọtụtụ afọ. Naanị ịkwesịrị ibudata nsụgharị kachasị ọhụrụ site na netwọk ahụ, rụọ nṅomi akpaaka ma nyefee mmelite ndị ahụ. Maka ntụziaka zuru ezu, lee ihe ndị ọzọ anyị nwere n'okpuru.
Nhọrọ ọzọ, dịka ị nwere ike ịhụ ndị ọkwọ ụgbọala kwesịrị ekwesị, bụ ịchọpụta ID ID. Mgbe nke ahụ gasịrị, a na-eme ihe iji chọpụta faịlụ ọhụrụ maka kpọmkwem ụdị ihe a. N'ịkọwa na usoro nke ime usoro a, anyị na-atụ aro ka ị mara onwe gị n'isiokwu anyị na njikọ dị n'okpuru ebe a. N'ebe ahụ ị ga-ahụ ntụziaka maka ịme nhazi a.
Usoro 5: Arụ ọrụ Windows
Windows sistemụ arụmọrụ abụghị naanị na-enye gị ohere ịlele ozi gbasara isi gbasara ngwa arụnyere, ọ nwere ngwá ọrụ wuru na-achọ ndị ọkwọ ụgbọala ziri ezi site na Ịntanetị ma tinye ha na laptọọpụ. N'ezie, usoro a anaghị adabara maka ihe ọ bụla, ma ọ bara uru ịnwale. Ya mere, anyị na-atụ aro ka ị gụọ ihe ndị ọzọ anyị nwere, njikọ nke ị ga-ahụ n'okpuru ebe a.
Dị ka ị nwere ike ịhụ, usoro ịchọta, nbudata ma wụnye software ahụ maka laptọọpụ ASUS K53S adịghị na mgbagwoju anya ma anaghị ewe oge. Ikwesiri ịhọrọ usoro kachasị mfe ma wụnye. Anyị nwere olileanya na ị ga-aga nke ọma ma ngwaọrụ ahụ ga-arụ ọrụ nke ọma.